ဝက်ချိုပေါင်း(ဗမာနည်း) | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ဒီနည်းလေးက အိသက်မမလေးရဲ့ နည်းလေးပါ။ သူ ချက်တိုင်းအလွန်စားကောင်းပါတယ်။ နူးအိနေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေက ချိုလွန်းလို့ သူချက်တိုင်းအများကြီးထဲ့ပါမမလေးရယ်လို့ ပြောရတယ်။ အဲဒီ ဝက်ချိုပေါင်းလေးရဲ့ ထူးခြားချက်က ဒီကြက်သွန်ဖြူလေးပါ။ ကျန်တာက အမေပေါင်းသလို ဗမာနည်းရိုးရိုးလေးပါ။
-ကြက်သွန်နီ၂လုံး၊ ဖြူ၃မွှာ( ထောင်းထားပါ)
-ကြက်သွန်ဖြူ ဥ ၂၀ခန့်( ဥလုံးလေးများအတိုင်း)
ဝက်သား၃ထပ်သားများကို ရေစင်စင် ဆေးပြီးပဲငံပြာရည်အနောက်၂ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ တရုတ်မဆလာ ၂ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ ရှာလကာရည်၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ ဂျင်း၂ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ကြက်သားမှုန့်၂ဇွန်း(စားပွဲတင်) တို့ဖြင့်နယ်ထားပါ။ ၁နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။
အိုးထဲတွင် နယ်ထားသော ဝက်သားများထဲ့ပြီး သကြားများထဲ့ပြီးအပူပေးရင် လှိမ့်ပေးပါ။ဆီလုံးဝ ထဲ့စရာမလိုပါ။ ဝက်ဆီက သူ့ဘာသာထွက်လာပါတယ်နော်.
သကြားများအရေပျော်ပြီး ဝက်သားများနီရဲလာသည်အထိ လှိမ့်ပေးပါ။
နီရဲလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ထောင်းထားတာများထဲ့ပြီး၂မိနစ်ခန့်လုံးပြီး ရေကိုဝက်သားနဲ့အညီထဲ့ပြီး တည်ထားပါ။
ဝက်သားအခေါက်နူးအိလာပြီ ဆိုရင် ကြက်သွန်ဖြူဥလေများထဲ့ကာ ၃မိနစ်ခန့်အဖုံးအုပ်ဆက်တည်ထားပါ။
ဒီထပ်ကြာကြာထားရင် ကြက်သွန်ဖြူပျောသွားမှာစိုးလို့ပါ။ သူ့အပူအတိုင်း မီးပိတ်ပြီးထားလိုက်ပါ။ ခုဆိုရင်အလုံးလိုက်လေး နူးအိနေသောကြက်သွန်ဖြူလေးများ မွမ်းမံထားသောဝက်ချိုပေါင်းအိအိလေးရပါပြီ။
By eithet • Posted in မြန်မာဟင်းလျာများ
18 comments on “ဝက်ချိုပေါင်း(ဗမာနည်း)”
04/06/2012 @ 1:47 am
04/06/2012 @ 1:57 am
pls do try, thank you 🙂
04/06/2012 @ 1:50 am
မနက်စောကြီး ..ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ မမအိ ရေ … လုပ်စားကြည့်မယ်ဗျိုး
Hsu Hsu Mon
04/06/2012 @ 3:53 am
မရေ.. ဆီထည့်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်… 🙂
04/06/2012 @ 11:18 am
အေး ညီမရေ မ ရေးဖို့မေ့သွားတာ ။ ဆီလုံးဝ ထဲ့စရာမလိုပါ။ ဝက်ဆီက သူ့ဘာသာထွက်လာပါတယ်နော် 🙂
04/06/2012 @ 5:07 am
It looks fabulous and I’m sure the taste will be great as well. Will try this weekends, thanks Ei Thet.
04/06/2012 @ 8:51 am
ညီမလေးရေ..အစ်မအမျိုးသားက ဖွားစောဆိုင်က ဝက်ပုန်းရည်ကိုအရမ်းကြိုက်တာ..
05/06/2012 @ 12:05 am
thank you par ma yay 🙂
17/07/2012 @ 4:19 am
17/07/2012 @ 6:35 pm
aye hote tae 🙂
17/07/2012 @ 7:29 pm
ဖြူ ရော နီ ရောပါ 🙂
01/04/2013 @ 9:20 pm
02/04/2013 @ 11:18 pm
depand on how you will serve them. will you serve with other dishes? if it is, (if it is me) i will cook 20 kg of pork belly. if you will serve with only 2-3 kinds of other dishes , you should cook more kg. cos it is buffet. (bear in mind they will take as much as they want even they dont eat later from their plates ) 🙂
03/06/2013 @ 4:28 pm
ချလိုက်အုံးမယ် အမရေ …. ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်တာ နည်းမကျတော့ မရဘူး .. ကျွန်တော်ကလည်း ဟင်းမချက်တတ်တော့ ပိုဆိုးတယ် … 🙂
03/06/2013 @ 9:53 pm
Bao Bao Huang
13/02/2015 @ 12:03 pm
အစ်မရဲ့ ဝက်ချိုပေါင်းဟင်းနည်းလေးအတိုင်းချက်တာ အိမ်မှာမျက်နှာရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အစ်မ
18/03/2015 @ 7:44 pm
thanksalot for telling me back ❤